XOG CULUS: k24 oo Xog Hoose ku ogaatay in Xilka laga qaadi doono Taliyaha Hey’adda NISA General Tuurayre+ Shaqsi Magac leh oo laga yaabo in lagu bedelo – Kismaayo24 News Agency
XOG CULUS: k24 oo Xog Hoose ku ogaatay in Xilka laga qaadi doono Taliyaha Hey’adda NISA General Tuurayre+ Shaqsi Magac leh oo laga yaabo in lagu bedelo
by Tifaftiraha K24 27th May 2016 27th May 2016 010
Warar Hoose oo K24 ay ka heleyso Madaxtooyada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayan in Madaxweynaha Soomaliya Xasan Shiikh Maxamuud uu isbadal ku Sameyn doono Hogaanka Hey’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugiida Qaranka General C/Raxmaan Tuuryare.
Xasan Shiikh ayaa lagu wadaa Maalmaha Soo socda in uu Xilka ka qaado general Tuuryare iyadoona la filaayo in lagu badalo Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo Mudanaysha Baarlamanka ka tirsan.
Wararka ayaa waxa ay sheegayan in General Tuuryare loo badali doono in uu Noqdo Hogaanka Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee Dowlada federaalka oo hada uu Madax ka yahay General Gaafow.
General Gaafow oo ay isku beel yihiin Xildhibaan Mustaf Dhuxulow ayaa waxaa laga yaaba in Madaxweynaha uu xil kale u Magacaabo iyadoon aan la helin Jagada loo dhiibo Doono Gaafow oo Laanta Socdaalka laga Xayuubin doono.
k24 ayaa sidoo kale heshay xog ku saabsan in Kulamo gaar gaar ah ay ka socdaan Villa Soomaliya waxaana macquul ah in isla Caawa uu madaxweynaha ku dhawaaqo Is badalkaan lagu Sameyn Doono HOgaanka NISA iyo Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha waloow ay dhici karto in dib u dhac uu ku yimaado .
Kismaayo24 ayaa isku dayday in ay la xiriirto Xubnaha qaar ee Isbadalka lagu sameyn doono iyo kuwa la magacaabi doono waloow aysan inoo suurta galin in aynu helno Maadama Mashquul badan uu jiro .
la Soco Xogta arimahaasi kusoo kororta Insha Allah
Daawo: Maamulka Dagmada Garbahaarey oo Arin Muhiim ah ku dhaqaaqay
DAAWO: Maxaadan Ogeyn oo Magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubbaland ka qabsoomay
DEG DEG: Sarkaal Ajnabi Alshabaab ah oo Nolosha lagu qabtay iyo kuwa kaloo la dilay
admin 16th January 2018 16th January 2018
DEG DEG: Amisom iyo Ciidamada Dowlada oo Maanta la wareegay Dagmo Muhiim ah oo Alshabaab Mudo bil ah ay ku sugnaaye
Muxu ku soo dhamaday Shirki Saka ila caawa ka socday Kismaayo